Blatter: Koobka adduunka lama iibsan karo - BBC News Somali
Blatter: Koobka adduunka lama iibsan karo
20 Febraayo 2016
Image caption Guddoomiyihii hore ee FIFA Sepp Blatter
Guddoomiyihii hore ee xiriirka kubbadda cagta adduunka, Sepp Blatter, oo ku adkaystay in codbixintii waddanka martigelinaya koobka adduunka ee sanadka 2022 aanay ahayn mid la sii qorsheeyay, isagoo sheegay inaysan jirin cid iibsan karta koobka adduunka.
Odaygan 79-jirka ah waxaa uu ku cawday in uu barii ka yahay oo uusan qabin eedo loo haysto oo ah musuqmaasuq isagoo sugaya natiijada racfaan uu ka qaatay xukun siddeed sano ah oo ciyaaraha laga mamnuucay.
"Waxaan hubaa in adduunyadan caddaaladi ka jirto, aniguna aanan sameyn wax ka soo horjeeda qaanuunka," ayuu sheegay.
Xiriirka kubbadda cagta adduunka waxaa ay dooranayaan ninkii beddeli lahaa Blatter 26 bishan February.
Blatter waxaa uu ku guulaystay xilli 5aad guddoomiyenimada Fifa bishii May ee sanadkii hore, hase ahaatee waxaa shaqada laga mamnuucay muddo siddeed sano ah sababtoo ah lacag gaaraysa£1.3m oo la sheegay inuu siiyay guddoomiyaha xiriirka kubbadda cagta ee Yurub ee loo yaqaan Uefa, Michel Platini, oo isagana ciyaaraha laga joojiyay.
Waxaa kaloo Blatter ku socda baaritaan dambiyeed ku saabsan maamul-xumo, laakiin mar walba waa uu beeniyaa inuu wax khalad ah sameeyay.
Isagoo jaraa'idka la hadlayay, Blatter waxaa uu ku dooday in madaxweynihii hore ee Faransiiska, Nicolas Sarkozy, uu weydiistay Platini inuusan u codeyn Maraykanka inay martigeliyaan koobka adduunka ee sanadka 2022, taas oo ugu dambaystii la siiyay dalka Qatar. Platini oo Faransiiska khadka dhexe uga dheeli jiray arrintan hore ayuu u beeniyay.
Blatter waxaa uu toddobaadkan ku soo laabtay xarunta FIFA iyadoo racfaankiisa la dhegeysanayay, guddiga anshaxa ee Fifa-na ay rajeynayaan in ciqaabtiisa la sii kordhiyo oo lagu soo rogo mamnuucid abid ah. Isagu waxaa uu yiri: "cidna ma dilin, bangina ma dhicin, qofna lacag kama qaadan, gabdhaha aan saaxiibka ahaan jirnayna si wanaagsan ayaan ula dhaqmi jiray ee maxaa la iga rabaa?
Shan musharrax oo kala ah: Amiir Ali bin al-Hussein, Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa, Gianni Infantino, Tokyo Sexwale iyo Jerome Champagne ayaa u tartamaya inay jagada guddoomiyaha Fifa ka beddelaan Sepp Blatter.